Faah faahinta Hordhaca kulanka Porto vs Liverpool lugta Labaad ee Champions League – Walaal24 Newss
Faah faahinta Hordhaca kulanka Porto vs Liverpool lugta Labaad ee Champions League
Klopp ayaa uga digay ciyaartoydiisa Liverpool inay soo xaadiraan wareega quarter-finalka Champions League madaama ay isku diyaarinayaan inay wajahaan Porto lugta labaad ee Caawa Arbacada ah.
Porto ayaa guul darreysatay guul darradii ugu dambeysay oo ay garoonkeeda kaga soo gaarto Liverpool tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii hore, iyadoo Reds ay ku badisay 5-0 wareega 16ka.
Liverpool ayaa hogaanka u heysa Portugal iyagoo 2-0 ku hogaaminaya lugtii hore ka dib markii goolal ay kala dhaliyeen Naby Keita iyo Roberto Firmino, laakiin Klopp ayaa ka warqaba inuu kulankaan ka maqan yahay.
Waxa uu u sheegay website-ka rasmiga ah ee kooxda: “Waa cadahay, 2-0, maxaan sameeyn lahaa? Taasi waa su’aasha ugu fudud ee la weydiiyo: wax walba waan u socon lahaa.
“Hadii aan 2-0 ku dhufano lugtii lugta hore, miyaan u maleyneynaa inaan baxnay?
“Mar walba waxay leeyihiin kulan aad u sareeya jawiga aadka u xoogan, laadkii ugu horeeyay waxa ay raaci doonaan jiheyn cad.
Kulanka wuxuu soo galayaa saacada Geeska Afrika marka ay tahay 10:00 PM oo Caawa ah.
“Waxaan isku barbardhigi karnaa waxoogaa aan ku barbareyneyno Manchester City sannadkii hore markii aan 3-0 ku dhignay, qof walbana wuxuu u maleeyay, ‘kala badh’ ama wax kasta.
“Waxaan halkaas u aadnay inaan ku guuleysano ciyaarta, waa qorshaha, mana ahan wax sahlan, waan ognahay taas, laakiin ma ahan inaan ka fekerno wax kale sababtoo ah taasi mar walba waa ujeedada.”
Porto ayaa lumisay lugta koowaad ee wareega isreebreebka Champions League iyadoo labo gool ama wax ka badan ku dhalisay lix jeer oo hore, lixdaas oo xiriir ahna waa laga reebay tartanka.
Sergio Conceicao ayaa uqalmin inuu u ciyaaro kooxda finalka 2004 ka dib markii uu durbadiiba u ciyaaray Lazio wareegii group-yada.
Iyadoo la diiday fursad uu ku soo galo sharaf ah inuu koobabka qaado sida ciyaaryahan, 44 jirkaan ayaa kalsooni ku qaba inuu ku soo laabanayo labo gool oo uu ku dhaliyo gurigiisa – lakiin waa uu ogyahay xajmiga shaqada uu wajahayo.
Waxa uu yiri Talaadadii: “Liverpool dhamaantood waa habka aan u maleynayo kubada cagta, marar badan, waxay muujiyeen inay yihiin kooxda ugu fiican adduunka.
“Waa inaan qasaarinaa labo gool oo aan ka dhalineyno koox aad u xoogan garbaha iyo weerarka.
“Isku dheelitirnaanta weerarradeena waa mid muhiim ah, shaqaalaha tababarka ayaa sameeyay qorshe, qorshaha ciyaarta, haatan waa inay hoos u dhigaan ciyaartoyda si ay garoonka uga qaadaan, waana kuwa fuliyay wax walba wanaagsan oo dhacay.
“Waxaan qabaa shaki shaki iigayga koowaad ah, lakiin ma ahan wax dhiira galin ah inta aan ka ciyaareynin quarter-finalka, islamarkaana aan ku soo laabanayo soo noqoshada taariikhda casriga ah.”
Porto ayaa waxaa ku soo laabtay Pepe iyo Hector Herrera ka dib markii ay labadoodaba seegeen kulankii Anfield.
Liverpool ayaa dib ugu soo dhaweyn doonta Andy Robertson ka dib markii uu seegay lugta hore ganaax.
Klopp ayaa waxaa ka maqnaan doona Dejan Lovren, kaasoo seegaya xaalada, taasoo la micno ah inuu Joel Matip u ciyaari doono Virgil van Dijk mar kale.
Alex Oxlade-Chamberlain ayaan sidoo kale u safrin sidii uu u hagaajin lahaa dayactirkeeda Melwood.
Liverpool ayaan waligood laga badinin kulan ka tirsanaa Champions League todobo kulan oo ay horey u ciyaareen (W4 D3 L0).
Tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii hore, Liverpool ayaa badisay seddex ka mid ah afartii kulan ee ugu danbeysay ee Champions League, kaliya waxaa laga badiyay Roma semi-finalka xilli ciyaareedkii hore (4-2).
FC Porto ayaa ah kooxda kaliya ee ka hartay Champions League si ay 100% ugu guuleysato gurigeeda xilli ciyaareedkan (4/4). Run ahaantii, Porto ayaa markii ugu dambeysay guuleysatay shan kulan ama wax ka badan oo ay ku ciyaareen gurigooda tartankaan intii u dhaxeysay Oktoobar 1998 iyo December 1999.
Liverpool ayaa ka soo kabsatay dhammaan sagaal ka mid ah labadii lugood ee ay horey u soo ciyaareen tartamada yurub ee Jurgen Klopp (4tii xilli ciyaareed ee 2015-16 Europa League, hal kulan oo ay ciyaari doonaan 2017-18 Champions League iyo afar Champions League tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii hore ).
Sadio Mane ayaa seddexleey u dhaliyay Liverpool kulankii ay wajaheen FC Porto ee Estádio do Dragão xilli ciyaareedkii hore ee Champions League; kaliya Luiz Adriano iyo Bate Borisov iyo Cristiano Ronaldo oo ka horyimid Atlético de Madrid ayaa dhaliyay hal gool seddexleey seddexleey ka horeysay Champions League, halka ciyaaryahan uusan waligiis shabaqa soo taaban oo hal kulan ka dhaliyay hal koox.
Tan iyo markii uu bilowday tartanka 2017-18, weeraryahanka Liverpool Roberto Firmino ayaa labadoodaba goolal dhaliyay, waxaana laga caawiyay shan kulan oo kala duwan tartamada Champions League, waana in ka badan ciyaaryahan kale.
Moussa Marega ayaa dhaliyay afar gool oo ka mid ah gurigeeda kooxda FC Porto ee Champions League xilli ciyaareedkan.
Xaqiiq ahaan, Liverpool ayaa isbedel ku sameyn karta kooxdan, lakiin ma doonayaan inay faa’iido gaar ah qaataan, gaar ahaan hadii ay goolka iska dhaliyaan.
Mohamed Salah ayaa ku soo laabtay qaab ciyaareedkiisii, Sadio Mane ayaa mar kale shabaqa soo taabtay dhamaadkii Isbuuca, halka Roberto Firmino uu ahaa ciyaaryahanka ugu fiican weeraryahanada dhowaan. Ma qaadi karo fursado laakiin waxaa laga yaabaa inuu bedelo khadka dhexe.
Kulamadii xalay waxaa quarter-finalka u soo baxay:-
Qarax Gaari oo ka dhacay wadada Maka Almukarama ee Magaalada Muqdisho
Salaad Cali Jeelle oo shaaca ka qaaday in magaalada Muqdisho ka socdaan abaabulka banaan baxyo looga soo horjeedo jiritaanka dowlada
Guddoomiyaha Maxkamadda Rafcaanka Gobolka Banaadir oo kormeer shaqo ku tagay Maxkamadda Degmada Hodan
Labo Qarax oo ka dhacay magalada Muqdisho
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay khariidaddii laysku daray Ethiopia iyo Soomaaliya
Ra’iisul Wasaarada Dalka Britain Theresa May oo xilka ka dageysa
Safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doono Kuwait oo laga guddoomay waraaqaha aqoonsiga